सम्बन्ध देखाउन नचाएको कि नाटकीय पारा देखाएको !! सन्दर्भ आँप जोडी - Experience Best News from Nepal
सम्बन्ध देखाउन नचाएको कि नाटकीय पारा देखाएको !! सन्दर्भ आँप जोडी
‘आँप’ जोडीका रूपमा समेत चर्चित यो जोडीले दर्जनौं भिडियोमा जोडीकै रूपमा अनस्क्रिन रोमान्स गरिसकेको छ भने केही चलचित्रमा पनि उनीहरूले जोडीकै रूपमा अभिनय गरेका छन् । काठमाडौंमा हालै आयोजित एउटा सार्वजनिक समारोहमा अभिनेत्री आँचल शर्मा तथा एक सञ्चारकर्मीबीच भएको सवाल–जवाफपछि अभिनेता पल शाहले आँचलको बचाउ गर्दै लेखेको स्टाटसले उनीहरूको निकटता पुष्टि गरेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि नै रोमान्समा रहेको यो जोडीले आफूलाई बेस्ट फ्रेन्ड मात्र बताइरहेको छ । यो जोडीले तीन वटा चलचित्रमा लगातार सँगै काम गरे पनि पछिल्लो समयमा आएर उनीहरूले केही चलचित्रमा अलग–अलग अभिनेता–अभिनेत्रीसँग काम गरेका छन् । अलग अभिनेता–अभिनेत्रीसँग काम गरेर के भयो त ? आँप जोडी भित्रैदेखि जोडिएको छ भन्ने कुराको प्रमाण अभिनेता शाहको स्टाटसले पुष्टि गर्छ ।
समारोहमा आँचलले सार्वजनिक रूपमै माफी मागे पनि पलले फेसबुकमा उक्त घटनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पलले माफी मगाउँदै र माग्दैमा समस्या हल नहुने बताएका छन् । कलाकारहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पनि पत्रकारहरूले सिक्न आवश्यक रहेको पलले आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् ।
Anchal SharmaPaul Shah